My Singing Monsters တေးရေးဆရာ – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
My Singing Monsters တေးရေးဆရာ – လှိုင်သာယာ&Hack
My Singing Monsters Composer တွင် Monster Maestro ဖြစ်လာသည်!
နာမည်ကြီးသီချင်း My Singing Monsters မှချစ်စရာဂီတ Monsters သံစုံတီးဝိုင်းတစ်ခုကိုကျင်းပပါ! Monster တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောအသံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်, တူရိယာ, နှင့်တူရိယာသံ. အစွမ်းထက်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောတေးဂီတအယ်ဒီတာကို သုံး၍ သင်၏မူရင်းသီချင်းကိုရေးဖွဲ့ပါ, ဒါမှမဟုတ်မင်းအကြိုက်ဆုံးတွေကိုပြန်ဖန်တီးပါ! My Singing Monsters ’Composer Island တွင်မတွေ့သော Monster အပိုင်းများကိုခံစားပါ, ထူးခြားသောရှားပါးအသံများနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Ethereals များကဲ့သို့.
My Singing Monsters Composer သည်ဂီတသင်္ကေတများကိုပျော်ရွှင်စရာနှင့်အမှတ်ရစရာနည်းလမ်းများဖြင့်သင်ယူရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျွမ်းကျင်အဆင့်အားလုံးမှလူများသည်ဤရိုးရှင်းသောဂီတအယ်ဒီတာနှင့်သီချင်းရေးခြင်းကိုလေ့ကျင့်ခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်!
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ Singing Monsters တေးရေးဆရာ - Happy Monstering ကို download လုပ်ပါ!
•ထူးခြားသောအသံများနှင့်ချစ်စဖွယ် Monsters ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ
•ရှားပါး Monsters များအတွက်အသံအသစ်များ
•သီချင်းများကို Ethereals ဖြင့်ရေးဖွဲ့ပါ
• Built-in ကီးဘုတ်
•အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာများသို့မဟုတ် In-app ကိုဝယ်ယူမှု
ကူညီကြပါ & ပံ့ပိုးမှု: www.bigbluebubble.com/support သို့သွားခြင်း (သို့) Options သို့သွားခြင်းဖြင့် Monster-Handlers များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ > အကူအညီကိုဆက်သွယ်ပါ.
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Composer, Monsters, Singing
← နိုက်၏စီးနင်းမှု: ပျောက်ဆုံးသွားသော Skytopia – လှိုင်သာယာ&Hack SortPuz – ရေစီအရောင် – ဂိမ်းလိမ်နည်းများကိုစီရန်&Hack →